Ama-Internet Ministries - Amasonto KaKristu Akuyakwamukela
Amasonto KaKristu Akuyakwamukela
"Khonzani omunye nomunye ngokumanga okungcwele. Amasonto kaKristu akubingelela."- AmaRoma 16: 16
Siyakwamukela kuwebhusayithi yethu. Ukuvakashelwa kwakho lapha kuyakwazisa kakhulu, futhi sithandazela ukuthi uzofuna ukusivakashela emuntwini njengoba sikhulekela iNkosi yethu uMninimandla onke njengomndeni owodwa.
Kule website ungafunda kabanzi mayelana namasonto kaKristu. Ungabhalisela izifundo zeBhayibheli, noma ungathintana nathi mayelana nanoma yimiphi imibuzo ongayithola mayelana neBhayibheli.
Isonto likaKristu ngumndeni wabantwana bakaNkulunkulu abasindiswa ngomusa kaNkulunkulu futhi bazibophezele ekukhonzeni iNkosi yethu kanye nabanye abantu. Kunamabandla amaningi emabandleni kaKristu ngokusebenzisa umhlaba wonke. Ebandleni leNkosi uzothola abantu bazo zonke izizukulwane kanye nokuhamba okuningi kokuphila okuye kwabizelwa ekuhlanganyeleni ubunye nothando nokwamukelwa. Siyajabula ngezipho eziyigugu iNkosi asinike yona, futhi sifisa ukuhlanganyela lezi zipho nezibusiso kuwe. Sicela wazi ukuthi kukhona indawo ekhethekile wena nomndeni wakho phakathi kwamasonto kaKristu.
Uma ungakwazi ukubona imidiya ngenhla - landa lapha: MP4